”Gabadhayda u qaado kiradii aad igu lahayd!” – Arrin ceeb ah oo Suuriyaanka ku haysata Turkiga | Hadalsame Media
Home Arrimaha Caalamka ”Gabadhayda u qaado kiradii aad igu lahayd!” – Arrin ceeb ah oo...
”Gabadhayda u qaado kiradii aad igu lahayd!” – Arrin ceeb ah oo Suuriyaanka ku haysata Turkiga
(Ankara) 09 Luulyo 2020 – Ololeeyayaal madani ah ayaa bilaabay inay ka dhiidhiyaan qoysas faqri ah oo Suuriyaan ah oo hablohooda yar yar ku daraya niman Turkish ah, si ay halkaa uga helaan woxoogaa kaash ah oo ay karoonaha u kaashadaan ama xitaa kirada guriga oo loo dhaafo.
Sida lagu qoray the Independent, ECPAT, oo ah dallad ay ku midaysan yihiin ururro ka shaqeeya la dagaallanka in carrruurta jinsi ahaan looga faa’iidaysto, ayaa sheegay inay dhibaato dhaqaale oo ku dhacday qoysas Suuriyaan ah ay sabab u tahay arrintan.
Ezgi Yaman, xoghayaha guud ee ECPAT Turkey, ayaa yiri: “Waxaan maqalnay kiisas ay qoysas Suuriyaan ihi gabdhohooda iibinayaan iyagoo wax guur lagu sheegayo ku siinaya niman Atraak ah — si toos ah iyo si dadbanba — si ay mararka qaar uga dhigtaan xaaska 2-aad ama 3-aad,”
”Ujeedku waa inay ugu yaraan hal qof culayskiisa qoyska uga qaadaan, waxay kaloo sidaa ku helayaan woxoogaa kharash ah oo ay kirada iskaga bixiyaan.” ayuu raaciyey isagoo sheegay inay badan yihiin qoysaska ninka ay guriga ka deggan yihiin ku yiraahda ‘Gabadheenna u qaado kirada aad nagu leedahay’.
Waxaa kale oo jira gabdho qadaamad ahaan ugu shaqeeya qoysas Turki ah oo la kulma addoonsi iyo meel ka dhac jinsi, guur qarsoodi ah iwm, kuwaasoo aan inta badan la sheegin ama laga hadlin.
Turkey ayaa waxaa uu hoy u yahay qaxooti carruureedka caalamka ugu badan, iyadoo bishii Abriil ay halkaa joogeen 4 milyan oo qaxooti ah oo 3.6 milyan oo ka tirsani Suuriyaan yihiin.
Previous articleLIX meelood oo ay madaxda Maamul-goboleedyadu uga eg yihiin hoggaamiye kooxeedyadii fashilmay!
Next articleDHEGEYSO: Dadka internet-ka ka dalbanaya adeegyada caafimaad ee Sweden oo rikoodhka jebiyey (Maxaa laga yeelayaa kuwa aan isticmaalin)